शाक्य र आचार्यलाई माधव नेपालको प्रस्न: मुख्यमन्त्री रोज्ने कि एमाले ?
काठमाडौं । कुनै समय माधवकुमार नेपालका सबैभन्दा विश्वासिला नेतामध्येका हुन् अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्य। एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा नेपाल पक्षबाटै शाक्य उपाध्यक्ष र आचार्य सचिव निर्वाचित भएका थिए।
माओवादी केन्द्रसँग २०७४ मा चुनावी तालमेल नभएको भए यी दुवै नेता क्रमशः बागमती र प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्ने थिए। तर, चुनावी तालमेल हुँदै माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता भएपछि ती प्रदेश एमालेकै भागमा परे पनि शाक्य र आचार्यले मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन्।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूनिकट डोरमणि पौडेललाई बागमती र शेरधन राईलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनाए। सिनियर नेता शाक्य र आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिएकोमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई चित्त बुझेन। उनले आफ्ना पक्षका नेताहरुमाथि प्रतिशोध साँधिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहे। तर, नेकपा बनिसकेकोले नेता नेपालको गुनासो पार्टीमा सुनुवाइ भएन।
२०७७ वैशाख ८ पछि देखा परेको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुग्यो। फेरि नेता नेपालले शाक्य र आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास थाले। २०७७ फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले नेकपा भंग गरिदिएपछि भने परिस्थिति फेरियो। एमालेभित्र ६ महिना रस्साकस्सी चल्यो। अन्ततः एमाले पनि विभाजन भयो।
भदौ १ गते आफ्नै अध्यक्षतामा माधव नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठन गरे र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए। तर, नेपालले मरिमेटेर साथ दिए पनि शाक्य र आचार्य दुवैले उनलाई साथ दिएनन्। बरु नेपालको साथ छाडेसँगै उनीहरु दुवैलाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर आयो। शाक्यले भदौ २ गते र आचार्यले भदौ १० गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए।
उता भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई नयाँ पार्टीको मान्यता दियो। त्यसैले आफूलाई साथ नदिएका दुवै नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने अवस्थामा नेपाल छन्। विभाजन हुनुअघि एमालेको एकल बहुमत रहेको प्रदेश १ र बागमतीमा माधव नेपालले दुवै मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने तयारी नै सुरु गरिसकेका छन्। र, यी दुवैलाई हटाउने शक्ति पनि माधव नेपालसँग छ।
प्रदेश १ मा ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा छ। जहाँ सरकार बनाउन ४७ मत चाहिन्छ। सभामुखसहित एमालेका ५१ सांसद छन्। पहिले नेपाल पक्षका २० सांसद थिए। दल विभाजन भएपछि भने नेपालको पार्टीमा आउने सांसदको संख्या निश्चित छैन। यद्यपि, आइतबार दिउँसोसम्मको अवस्थालाई हेर्दा सो प्रदेशबाट नेता नेपालको नयाँ पार्टीमा १० जना प्रदेश सांसद खुलिसकेका छन्।
नेपाल निकट एक सांसदका अनुसार अन्य ५ जनाले आउने बताइसकेका छन्। ‘प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री लडाउन चाहिने संख्या हामीसँग पुगिसकेको छ, हामीले मुख्यमन्त्रीलाई बलशाली तबरले लडाउन चाहेका हौँ,’ नेपालनिकट अर्का सांसदले भने, ‘अहिलेसम्म १० जना हाम्रो पार्टीमा खुल्नुभएको छ, अन्य ५ जना साथीहरुसँग छलफलमै हुनुहुन्छ।’
बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि अल्पमतमा परिसकेकी छन्। १ सय ९ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले एक्लैको ५५ सांसद छन्। त्यसमा माधव नेपाल पक्षमा २० सांसद थिए। नयाँ दल बनाएपछि नेपाल पक्षमा जम्मा १३ जना मात्र खुलेका छन्। यही संख्या पनि शाक्यलाई हटाउन पर्याप्त छ।
काठमाडौँका ३, काभ्रेका २, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, धादिङ, चितवन, मकवानपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रदेश सांसदहरु नेपालको नयाँ पार्टीमा खुलिसकेका छन्। अन्य सांसदहरुसँग पनि कुराकानी भइरहेको नेताहरुले बताएका छन्।यद्यपि, शाक्य र आचार्य एकीकृत समाजवादी पार्टीमा खुलेको अवस्थामा दुवैको पद सुरक्षित हुने नभए केही दिनभित्रै अपदस्थ हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय नेता जगन्नाथ खतिवडाले बताए।
उनीहरु ओलीतिरै खुलेको अवस्थामा अध्यक्ष नेपालले दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्ने आफ्ना पक्षका नेताहरु तयार पारिसकेका छन्। बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे र प्रदेश १ मा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ। ‘उहाँहरु (शाक्य र आचार्य) दुईजना मुख्यमन्त्री हाम्रै पार्टीमा आउनुभयो भने मुख्यमन्त्री पद जोगियो,’ खतिवडाले भने, ‘ओलीकै पार्टीमा बस्नुभयो भने मुख्यमन्त्री बनाइराख्दैनौँ। हाम्रो पार्टीमा नभएका व्यक्तिलाई किन राख्छौँ र? उहाँहरुको पद धरापमा छ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुखहरु फेरबदल गरिसकेका छन्। गठबन्धनकै सरकार रहेकाले मुख्यमन्त्री शाक्यले अन्य दलको साथ पाउने सम्भावना कम छ। त्यही भएर शाक्यलाई बढीमा २ दिनमात्र कुर्न सकिने बागमती प्रदेशका एक सांसदले बताए।
‘अब बढीमा २ दिनभित्र उहाँ हाम्रो नयाँ पार्टीमा खुल्नुभएन भने मुख्यमन्त्रीबाट हटाउँछौँ। उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माधव नेपाल कमरेडले त्यत्रो लड्नुभयो तर, मुख्यमन्त्री बनेपछि माधव कमरेडलाई छाड्नुभयो,’ ती सांसदले भने।प्रदेश १ को प्रदेश सभामा नयाँ पार्टीको सनाखत मंगलबारसम्म गर्ने तयारी छ। त्यसअघि नै मुख्यमन्त्री आचार्य नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीमा नखुले उनलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी छ।
‘एक दुईदिनभित्र उहाँ हाम्रो पार्टीमा नखुले मुख्यमन्त्रीमा राख्दैनौं,’ एक प्रदेश सांसदले भने, ‘माथिको सर्कुलर पनि त्यही छ।’ आइतबार नै संसदीय दलको बैठकपछि बोल्दै प्रतिनिधि सभाका सांसद विरोध खतिवडाले बागमती र प्रदेश १ का दुवै मुख्यमन्त्री गठबन्धनमा नआएमा उनीहरुलाई हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने बताए।
‘उहाँहरु गठबन्धनमा आउनु भएन भने हामी मुख्यमन्त्री फेर्छौँ,’ खतिवडाले भने, ‘गठबन्धन बाहिरकालाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने कुरा सम्भव हुने कुरा पनि भएन।’ सरकारले भदौ १ गते एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो।
सो अध्यादेशमा विभाजन भएको दलबाट स्थानीय तह वा प्रदेशमा रहेका जनप्रतिनिधिले २१ दिनभित्र पार्टी परिवर्तन गरेमा कारवाही नहुने व्यवस्था गरिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय सभा दलको नेतामा बेदुराम भुसाललाई चयन गरिसकेको छ।